Kulan-waynihii 4aad Ee Dhalinyarada DDSI Oo ka furmay jigjiga . - Cakaara News
Kulan-waynihii 4aad Ee Dhalinyarada DDSI Oo ka furmay jigjiga .
Jigjiga(cakaaranews) sabti, 27ka August, 2016. Waxaa maanta ka furmay xarunta deegaanka Jigjiga gaar ahaan madasha shirarka ee qaryaan dhoodaan kulan waynihii 4aad ee dhalinyarada deegaanka.
Kulan waynahan oo loo qabtay 580 xubnood oo ah dhalinyarada ka socoday Gobolada iyo maamulada magaalooyinka DDSI ayaa waxaa furitaankiisii ka soo qaygalay masuuliyiin ay ka mid yihiin wasiir ku xigeenka madaxtooyada DDSI mudane Ibraahin Aadan mahad, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha DDSI mudane Maxamed Bile, wasiirka xafiiska tababarada, xirfadaha iyo farsamada DDSI mudane Naasir Axmed , iyo masuuliyiin kale.
Waxaana furitaankii kulanka ka hadlay wasiir ku xigeenka madaxtooyada mudane Ibraahin Aadan Mahad wuxuuna sheegay in kulan waynahan 4aad ee dhalinyarada DDSI ku soo beegmay wakhti ay xukuumada DDSI guulo waawayn ka soo hoysay dhinacyada horumarka, nabadglayada iyo maamulka suuban. Wasiir ku xigeenka ayaa ka warbixiyay in ay dhalinyaradu tahay laf-dhabarta bulshada loogana baahan yahay in ay ka midho dhaliyaan istaarajiyadaha iyo qorshayaasha horumarineed ee u dajisan xukuumada DDSI.
Dhankiisa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha DDSI mudane Maxamed Bile oo ka hadlay furitaankii kulankaasi ayaa sheegay in xukuumada DDSI dadaal balaadhan galisay hirgalinta xidhmaha horumarinta dhalinyarada DDSI iyo abuuritaanka ilaha shaqada dhalinyarada. Wasiirka ayaa sheegay in xooga la saarayo sidii loo cidhibtirilahaa fikirada ma shaqaystanimada.
Kulan-waynahan oo halku dhig looga dhigay” waxaan la halgamaynaa ma shaqayste nimada iyo shaxaadka” ayaa waxaa lagu soo bandhigay istaraatajiyadaha iyo yoolasha lagu gaadhayo horumar waara oo joogtaysan.